Ubuninzi beRabies Vaccine Vero China Manufacturer
Ukusetyenziswa ukukhusela amaRabi.,Khuselwe kuKhanya,Izimpembelelo ezincinci
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: Ukusetyenziswa ukukhusela amaRabi.,Khuselwe kuKhanya,Izimpembelelo ezincinci
Home > Imveliso > I-Rabies Vaccine Usetyenziso lwabantu > Bulk Final > Ubuninzi beRabies Vaccine Vero
 Ubuninzi beRabies Vaccine Vero
Ekubeni zonke izifo ezineengxaki zesifo sezilwanyana zibangelwa ukufa kwaze kwaba yimizi mibini yaseFransi, iLouis Pasteur kunye noEmile Roux , bahlakulela ukugonywa kwe-rabies yokuqala ngo-1885. Esi sifo sasiqala ukusetyenziswa kumntu ngoJulayi 6, 1885, ngoJoseph Meister oneminyaka elithoba ubudala ( 1876-1940), owayesetyenziswe yintwa enobungozi. 
Ukugonya kwabo kwakuqulethe isampula ye-virus evunwe kwiinqunjwane (kunye nokuba sele zifile) ezibuthathaka ngokuzivumela ukuba zomile iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-10. Izigulana ezifanayo ezisisigxina zamathambo zisetyenzisiwe ngoku kwamanye amazwe, kwaye ngelixa zixabiso elincinci kunamathuba okugonywa kweekliniki zanamuhla, azisebenzi.  Iigciwane ze-neural tissu nazo zibeka ingozi ethile yeengxaki ze-neurological.
Uluhlu lweMveliso ezinxulumene noko: Ukusetyenziswa ukukhusela amaRabi. , Khuselwe kuKhanya , Izimpembelelo ezincinci , Ukusetyenziswa ukukhusela amaRabi , Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela , Ukugonywa kwe-Bioproducts Ukukhusela okufanelekileyo , Umsebenzi kunye nokuSebenza , Ukugonywa okukhuselekileyo kuViricella